Ady paritaka, ady saritaka… | NewsMada
Ady paritaka, ady saritaka…
Tsy takona afenina, tena miparitaka be ny tsimokaretina Coronavirus amin’izao: mitombo ny tranga vaovao amin’ny fitondrana izany, miparitaka amin’ny faritra maro, mitombo miandalana ny mamoy aina… Eny, na tsy azo lavina aza fa maro ny marary sitrana soa aman-tsara mitaha amin’ireo mbola tsaboina. Nefa miaka-midina ny tarehimarika indraindray fa mbola ao anatin’ny ady izao: ady paritaka…
Izay ady amin’ny fiparitahan’ny valanaretina Covid-19 izay izao no tena lehibe sy maika ary tsy maintsy atrehina; eny, na zava-dehibe aza ny fitsaboana ireo mitondra ny tsimokaretina sy ny marary. Ahina mafy ary tena atahorana ny fiparitahan’ny valanaretina manerana an’i Madaga­sikara, na efa mby amin’izany aza, sanatria, ny toe-dra­haraha. Ady paritaka, raha fiteny izany, ny atao sy atrehina amin’izao?
Amin’izany, mila miaro tena ny tsirairay. Fiarovana ny hafa koa izay. Nefa mila firaisankina izany, fifanomezan-tanana, fifampitokisana, tsy fifanilihana na fifampiandra­sana, fitoniana… Iombonana ny fahavalo tsy hita maso, mamono, tsy mifidy olona… Mby aiza izany rehetra izany amin’izao? Tena miparitaka be ihany ny valanaretina: tsy any amin’ny hoe voafehy sa tsia ny adihevitra fa izay tena iatrehana azy.
Raha ao anatin’izao fahamehana ara-pahasalamana amin’ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao, sanatria, no misy ady saritaka an-toerana: loza iray, loza roa. Ny fahavalo, tsy mitsaha-manafika matoa mitombo hatrany ny isan’ny olona mitondra tsimokaretina, miparitaka amin’ny faritra maro. Ndeha hampiana trotraka amin’ny ady saritaka an-toerana noho antony tsy inona?
Manome vahana ho azy ny fahavalo tsy hita maso hoe iombonana izany; eny, na izay mety ho hita maso aza: misy ny miandry kendry tohina ny hisian’ny ady saritaka? Mbola ho ady saritaka hafa indray, sanatria, ny hoe: tsy voafehy ny valanaretina, tsy mahomby ny paikady, tsy mety izay atao… Hanao ahoana? Izay vao tena ho ady saritaka, na ho ady paritaka: hiparitaka ny valanaretina, hiparitaka ny mpiady…